Last update11:34:50 PM GMT
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် နယ်စပ်တွင် တာဝန်ကျနေသော နစက ဗိုလ်ကြီး တစ်ဦး၏ သင်္ကြန် စရိတ် အတွက် လိုအပ်နေသော ငွေကို ဖြည့်ဆည်း ပေးရန် အတွက် တပည့် ဖြစ်သူ တပ်ကြပ်က ပြည်သူများပိုင်ဆိုင် သော မီးသွေးအိတ်များကို လွန်ခဲ့သော အပတ်က လိုက်လံ သိမ်းယူသွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဒေါ်စု ရုပ်ပုံပါ တီရှပ်ဝင်ဆင်သူ အရိုက်ခံရမူ ရဲတွင် အမူဖွင့်၍ မရ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရုပ်ပါ တီရှပ် ၀တ်သဖြင့် လက်သီးဖြင့် ပစ်ထိုးခံရသူက အဆိုပါ ကိစ္စကို ရဲစခန်းသို့ သွားရောက် တိုင်ကြားရာ ရဲက အမူကို လက်မခံဘဲ ပယ်ချ ခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
နယ်စပ်မျဉ်းကို ပေါင်းကူးတံတားအဖြစ် ပြောင်းသင့်ပြီဟု ထိုင်းရေဒီယိုဌာနအကြီးအကဲပြော
နယ်စပ်မျဉ်းကို တံတိုင်းအဖြစ် မမှတ်သင့်တော့ဘဲ ပေါင်းကူးတံတားအဖြစ် ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ ရေဒီယိုဌာန အကြီးအကဲက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးဆွေးနွေးသည့် Media an...
ခွန်ထွန်းဦးနှင့်စိုင်းညွန့်လွင် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရောက် ပါတီဝင်ဟောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံ
SWAN ၁၃ နှစ်ပြည့် လုပ်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခက်အခဲများပြော
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံး မြဝတီမြို့၌ ဖွင့်လှစ်
ရှမ်းမြောက်ပိုင်း ပေါက်ကွဲမှုများ ရွေးကောက်ပွဲ မထိခိုက်နိုင်
ဒုက္ခသည်အရေး ပကတိအခြေအနေ UNHCR ဆွေးနွေး
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မြဝတီမြို့၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံးဖွင့်ပွဲအခမ်းနား ကို မတ်လ၂၇ ရက်နေ့နံက် ရနာရီတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ရာ ပရိဿတ်၅၀၀ကျော်တက် ရောက် ကြောင်းသိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်က ရဲအရာရှိ ၂၀ ကျော် မီဇိုရမ်တွင် အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းတက်ရောက်
မောင်တောမြို့နယ် ဆေးရုံး၏ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၏ ပြင်ပ ဆေးခန်းတွင်ဗိုက်နာ သဖြင့် ဆေးကုသ ခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာ ကားဒါရိုက်ဘာ တဦးမှာ ဆရာဝန် ဆေးညွန်အတိုင်း ၀ယ်သောက်ပြီး၊ နာရီဝက်အတွင်း သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR က ဒုက္ခသည်များ၏ ပကတိအခြေအနေကို သိရှိရန်အတွက် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ယခုရက်ပိုင်းတွင် သွားရောက်ကာ စခန်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ် InterAction ၏ လူမှုဦးဆောင်ဆု ကရင်အမျိုးသမီးရရှိ
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ရန် ကရင်နိုင်ငံရေးသမားများ ဆွေးနွေးခဲ့
အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှု မင်းတပ်ချင်းလူငယ် အရေးဆိုမည်
မြန်မာအစိုးရသစ်တက်လာသည့် နောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်အတွင်း အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေး စေခိုင်း မှု လျှော့ပါး လာနေပြီဖြစ် သော်လည်း မင်းတပ်မြို့ပေါ်တွင် စည်ပင်မှူးက ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားများအား အတင်းအဓမ္မ လုပ် အား ပေး စေခိုင်းနေကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ သိန်းစိန် ချင်းပြည်နယ် ခရီးစဉ် ရက်မတိကျသေး
ချင်းပြည်နယ်တွင် ဆယ်တန်းဖြေဆိုသူ ဦးရေ နှစ်စဉ် လျှော့နည်းလာ
Myanmar Egress က ချင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် Civic Education for Civil Society သင်တန်း ပို့ချ
နယ်စပ်မျဉ်းကို တံတိုင်းအဖြစ် မမှတ်သင့်တော့ဘဲ ပေါင်းကူးတံတားအဖြစ် ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ ရေဒီယိုဌာန အကြီးအကဲက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးဆွေးနွေးသည့် Media and Migrant Workers Seminar ၌ ပြောကြားလိုက်သည်။
အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း အောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျားဖြူကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြော
မြန်မာအစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန်သာ ရှိကြောင်း KIO ပြော
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)က “အစိုးရနှင့် နောက်ထပ်အပစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး လက်မှတ်ထိုး ရန် မလိုဘဲ KIO နယ်မြေအတွင်း ဝင်ရောက်နေ သော အစိုးရတပ်များကိုရုပ်သိမ်းပေးရန် နှင့် နိုင်ငံတကာကသက်သေပြု ပေးသည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန်သာလိုပါကြောင်း” UNFC တပ်ပေါင်းစု သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတရပ်တွင် KIO အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလဂျာက ပြောကြား ခဲ့သည်။
ကရင်နီပြည်နယ် လောပိတ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံမှ ရန်ကုန်သို့ သွယ်တန်းပေးနေသည့် လျှပ်စစ်တာဝါတိုင် အောက်တွင် မြုပ်နှံထားသည့် မိုင်းပေါက်ကွဲရာမှ ကလေး နှစ်ဦး သေဆုံးပြီး နှစ်ဦး ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည်။
ကရင်နီမှာ ဘီးလပ်မြေစက်ရုံဆောက်ဖို့ တရုတ်နဲ့ ဂျာမနီ ပညာရှင်တွေရောက်ပြီ
အပစ်ရပ်နောက်ပိုင်း ကရင်နီတပ်နဲ့ အစိုးရတပ်တို့ရဲ့ အခြေအနေ
နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု ရှေ့တဆင့် တက်ဖို့ စုပေါင်းသဘောတူညီမှု ကရင်နီ ရရှိ
ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမဲဆန္ဒနယ်၌ မဲစာရင်းပိတ်သည့်အချိန်အထိ မဲစာရင်းအရေအတွက်များ တိ တိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်း ယနေ့ အထိမရှိ ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးမြင့်ကပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူါ်ချုပ် ဘန်ကီးမွန်း မြန်မာပြည်သွားရန်ရှိ
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း တနင်္ဂနွေနေ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲများအား ဆက်လက်ကျင်းပသွားဖွယ် ရှိကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က ပြောသည်။
အပစ်ရပ်သော်လည်း မွန်ပြည်သစ် နိုင်/ကျဉ်းများ လွတ်မလာသေး
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မြောက်နိုင်ရေးအတွက် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO နှင့် ညှိုနှိုင်းလိုသည် ဆိုသည့် အမျိုးသား ဒီမိုရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ၏ ကျေညာချက်ကို KIO အဖွဲ့က ကျေညာချက် တစောင်ဖြင့် တုန့်ပြန်လိုက်သည်။
၈၈ မျိုးဆက်များ ၂၀၁၅ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံယူမည်
တပ်မတော်နေ့ကို တာချီလိတ်တွင် ဗုံးသံဖြင့်ကြို
ဘီအန်အိုင်မှကြီးမှူးကျင်းပသော အမျိုးသမီးအင်တန် သင်တန်းဆင်းပြီး
အမျိုးသမီးများ စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေး အတွက်ဘီအန် အိုင်မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော အမျိုးသမီးအင်တန် သင်တန်း ကို စက်တင်ဘာ (၁၅) ရက်နေ့တွင်ပြီး ဆုံးပြီး သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။
သျှမ်းသံတောင်ဆင့် လက်ထောက်အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်းသည် အဖွဲ့၏ လုပ်အား(၄၀)ရာနှုန်းဆုံးရှုံး
လက်နက်ချ ဒီကေဘီအေ တပ်မှူးအချို့ အရေးယူခံရမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်
ထားဝယ်ခရိုင်ရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အတွင်း စစ်အစိုးရတပ်များ ဝင်ရောက်လာ
မီးဇာမှန်အိမ် မြှင့်လိုက် ကြပါစို့။
အမှောင်ထဲ လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတာ ကြာရှည်ပေါ့လား။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်တောင်း ဆိုမှုကို မြင်ခဲ့ရသည်။ အရှုးမီးဝိုင်း ခံရတော့ ”စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင်မှန်အောင်ပစ် တယ်ကွ။ သေဖို့သာ မှတ်ပေရော့” အော်ပြီး ဆင်းပြေးသွားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ထိပ်သီး ဗိုလ်နေဝင်းကို ရ-ရက်သားသမီး များဖြစ်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်များ မြင်တွေ့လိုက်ကြပေသည်။
သင်္ဘောဦးဆွမ်းတော်ကြီးတင်ပွဲ (သို့) ယဉ်ကျေးမှု ဟူသည်
နိုင်ငံခြား အရင်းအနှီးနှင့် ရှမ်း/ကချင် ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ
(ဆောင်းပါး) ဦးသိန်းစိန်သမ္မတဖြစ်လာသော ကြံ့/ဖွံ့အစိုးရခေတ် ၂၀၁၁ ခု၊ မတ်ခ်ျလကစ၍ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက် ပိုင်းဒေသမှာတိုက်ပွဲ ဖြစ် လာပြီး ကချင်ပြည်နယ်တွင်မူဇွန်လမှစ၍တိုက်ပွဲ ဖြစ်လာသည်။ ဤတိုက်ပွဲများသည် အရှိန်လျှော့ ကျသွားခြင်း မရှိပဲ တဆင့်ပြီးတဆင့် မြင့်၍ပြင်း ထန် လာနေသည်။
Generation သစ်များကြားမှ မှေးမှိန်လာသော “ကရင်” စာ
ပြေးကြည့်စရာမလို၊ တွေးကြည့်တာနဲ့သိနိုင်တဲ့ မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်အဖြေ
၂၃ နှစ်တာ ချင်းအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲ့လာခဲ့သည့် ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦးသည် ချင်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေး သမိုင်းတွင် ကဗ္မည်းသစ်ထွင်ခဲ့ပြီဟု ပြောဆိုသံများ ယခုတလော ကြားကြား နေရသည်။
ချင်း အရေး နှင့် အိန္ဒိယ – မြန်မာကုန်သွယ် ဆက်ဆံရေး
ချင်းတောင် သဘာဝ သင်္ကေတများ
ဓည၀တီ ဘူးသီးတောင်မှသည် ဧရာဝတီ မြောင်မြဆီသို့
ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ် ဇာတိ ဦးမြတ်ထွန်းဟာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အခြေစိုက် နိရဉ္စရာ သတင်းဌာနကို သတင်းပေးပို့တဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လမှာ မောင်တော- ဘူးသီးတောင် ကားလမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဗျူဟာဂိတ်မှာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်
ရွေးကောက်ပွဲကို မျှော်လင့်ချက်မရှိသည့် ရခိုင်ပြည်သူတချို့
အ၀ကျွန်းရှိ ရခိုင်လေဘေး ဒုက္ခသည်များကို တောင်တန်းဒေသရှိ သံဃာများ သွားရောက် အကူအညီပေး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရသစ် အာဏာရလာတာ လေးလကျော်ကြာပေမယ့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေး အရိပ်အယောင် မတွေ့ ရဘဲတိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ နေ့စဉ်ဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေ ပါတယ်။
မဟာဒေဝီနဲ့ရှမ်းပြည်အရေး အပိုင်း (၁)
လားရှိုးက ရှေ့နေ စောလွင်ရဲ့ လူမဆန်မှုတွေ ပြည်ပအသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေကို မျှဝေပေးကြပါ
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ လိုင်ဇာမြို့ အထက် ဝေကြိုင် (Woichyai) ကျေးရွာ က ခန်းမကြီးတခုမှာ အနီ အဖြူ အနက် အပြာ ရောင်စုံထွေးပြားနေသည့် အ၀တ်ထုပ်ကြီးတွေနဲ့ အိုးခွက်ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေကို တွေ့နေရပါ တယ်။
အရင်က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်တွေ ဘာကြောင့် ပျက်ခဲ့ရသလဲ
မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်ကို နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော် ခုခံတော်လှန်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက် နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်တဲ့ကရင်နီအမျိုး သား တိုးတက်ရေးပါတီ (ကေအဲန်ပီပီ)ဟာ အရင် စစ်အစိုးရ (နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည် ဆောက်ရေး အဖွဲ့-နဝတ)နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကရင်နီ အမျိုးသမီးတွေကို ပြန်ပြောပြပေးပါ
အရေးပေါ် လိုအပ်မှုတို့အတွက် ကျောပိုးအိတ် ဆက်လွယ်နေကြခြင်း
မေတ္တာကို လက်တွေ့ပြသခြင်း သို့မဟုတ် လေဘာဒေးနေ့
ချမ်းစိမ့်စိမ့် ဆောင်းညများတွင် ငှက်ဖျားတက်ခဲ့ဖူးသည်။ ဆောင်းတွင်းအိပ်မက် ဂယောက်ဂယက် ဆိုသောစကားမှာ တကယ် ပင် ဖြစ်၏။ စိတ်အလျဉ်ပြေးလွှားရာ လိုက်လျှောက်မြင်မက်နေသည့် တောင်စဉ်ရေမရ အိပ်မက်အပိုင်းအစများမှာ လုံးလည်ပတ်ချာလိုက် ပြီး အကြောင်းအရာတခုတည်း၊ တနေရာတည်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်၍ ရောက်ရောက်နေတတ်သည်။
ဘာကြောင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု လိုအပ်နေသလဲ?
“ဝါဒစွဲ၊ လူမျိုးစွဲပြဿနာ” အဖြစ်သာ သဘောထားကြည့်မြင်နေမယ်ဆိုရင်
မြန်မာအစိုးရအား ၆၃ နှစ်ကြာ လက်နက်တော် လှန်ခဲ့သော ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က ပထမဆုံးအကြိမ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သည့် အပေါ် ပြည်တွင်း ကရင်နိုင်ငံရေးသမားများက ကြိုဆို လိုက်ကြသည်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက ဒေသခံ ကျေးရွာ များထံ ငွေကြေး အတင်းအဓမ္မ ကောက်ခံ....
လိုင်လာမုန်တိုင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည် - IMD
မြန်မာနိုင်ငံ မိုးနှောင်း၊ မိုးလွန်လများ ဖြစ်သည့် စက်တင်ဘာနှင့် အောက်တိုဘာလတို့တွင် မုန်တိုင်း ၄ ကြိမ်ထက် မနက် ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း ကြိုတင်သတိပေး....
နှလုံးသားက ငိုကြွေးသံကို နားထောင်ပါ
ပန်ကြားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းနှင့် မဇ္ဈိမ အင်တာဗျူး
ပြန်ကြားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းနှင့် မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနတို့ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာအသံနှင့် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ရေးဌာနတွင် တနင်္ဂနွေနေ့ (မတ်လ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်) က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ရာ မြန်မာပြည်တွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေသော မဇ္ဈိမ အတွက် ဝန်ကြီးနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် မေးမြန်းခွင့် ရရှိခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်စုခရီးစဉ်အတွက် ကြိုဆိုဖို့ ပြင်ဆင်နေ (အမှတ် ၃ မဲဆန္ဒနယ် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးမဲဆွယ်ဟောပြောဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ NLD ပါတီက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်ဒေသတွေမှာ သွားရောက်စည်းရုံး နေသလို အခုလဆန်းပိုင်းကလည်း သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကလော၊ အောင်ပန်းမြို့တွေမှာ သွားရောက် ဟောပြော ခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ဘက်စစ်ရှိန်လျှော့မည်ဆိုပြီး နေ့စဉ်တိုက်ခိုက်နေသည့် KIA နှင့် အစိုးရတို့ နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်များ လာမည့် ဆွေးနွေးပွဲ အပေါ် စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇော၏ အမြင်
မိုင်းထားမှာဌာနချုပ်စိုက်ဖို့ RCSS စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေ (RCSS ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးလောဝ်ဆိုင်နှင့်အင်တာဗျူး)
၈၈ က မွေးဖွားလိုက်တဲ့ ကရင်နီအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် မိဆူးပွင့်
သားသမီးလက်ထက်မှာ ကရင်နီအမျိုးသားလက္ခဏာတွေ မပျောက်သွားရလေအောင်…
"ရခိုင်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ သယံဇာတတွေဟာ ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေ ပိုင်တဲ့ အမွေအနှစ်တွေဖြစ်တယ်"
မတ်လ ၂၂ရက်နေ့က "မြန်မာသံယဇာတ ကျိန်စာ" လို့အမည်ပေးထားတဲ့ အစီရင်ခံစာတစောင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ အခြေစိုက်တဲ့ Arakan Oil Watch (AOW) အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲ ပြုလုပ်နေတဲ့ ကိုကောင်းကျော်ခိုင်နဲ့ မေးမြန်းခြင်း
ကျနော်တို့ သွားဆွေးနွေးတာကတော့ သူတို့(အစိုးရ)အပိုင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လုပ်ချင်တယ်။ အဲ့ဒါတော့ သူတို့ရဲ့ တင်ပြချက်ပဲ။ ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း ဒီအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် အချက် ၁၁ချက်ကို တင်ပြတယ်။
ကျတော် မင်းတပ်မြို့နယ်၊ အေးစခန်းရွာက ဆလိုင်းလိန်းအောမ်ပါ၊ အဖေက ပူး လိန်တမ်၊ အမေ ပီး အေနိုင်း မွေးချင်း ငါးယောက်၊ လက်ရှိ အသက် ၂၆ နှစ်ပါ၊
ဖက်ဒရေ၀န်းကျင်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ စီအဲန်ပီ ခေါင်းဆောင်တဦးနဲ့ အင်တာဗျူး
၁….မြန်မာစစ်တပ်ကနေသိမ်းယူထားတဲ့ လဂပ်ဘွမ်စခမ်းကို ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြန်လည်သိမ်းယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂…. ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နယ်စူကလိမြို့သစ်မှာ အစိုးရဘက် ကနေမြေမြုတ်မိုင်း ရှင်းလင်းနေတယ် ဆိုတာနဲ့။
၃…. တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်အထူးစီးပွါးရေးဇုံစီမံကိန်းထဲမှာပါဝင် တဲ့ အညာဖျားရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ကြောင့် ဒေသခံရွာသားတွေ ဘယ်လိုအခက်ခဲ တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါသလဲဆိုတာကို ကြားကြ ရမှာပါ။
ရင်သားကင်ဆာ ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရုံနဲ့ ဘယ်အမျိုးသမီးမဆို ကျောချမ်းတုန်လှုပ်သွားစေတာပါပဲ။ ကျမရဲ့ ရွာမှာ ဒီလိုမျိုး ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ ဒီသေဆုံးမှုတွေကို တွေ့ရတော့ ကျမ ရင်သားမှာလဲ အဖုထွက်တော့ ကြောက်ပြီး ဆေးခန်းပြလိုက်ရတယ်လို့ ရင်သားတစ်ဖက်ကို ခွဲထုတ်လိုက်ရတဲ့ ပဲခူးမြို့က ဒေါ်သီတာလင်းက ပြောပါတယ်။
အခြား အမျိုးသမီးအသံဖိုင်များ နားဆင်ရန် >>>
BNI အဖွဲ့ဝင်များ ၏ဂျာနယ်များ
Posted by နေနိုင် မင်း at 6:34 AM